[Xog Xasaasi Ah]:- Walaaca Mucaaradka Somaliland Ka Qabaan Doorashada + Ballanqaadka Wakiilada Beesha Caalamka Iyo Natiijada Kulankii Dhex Maray Dhinacyadan
Wednesday 24th November 2021 13:48:29 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe
Walaaca Mucaaradka Somaliland Ka Qabaan Doorashada + Ballanqaadka Wakiilada Beesha Caalamka Iyo Natiijada Kulankii Dhex Maray Dhinacyadan
Hargeisa(KarinNews)-Hogaamiyayaasha iyo masuuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland ee WADDANI iyo UCID oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulan ballaadhan la qaatey dalalka iyo hay'adaha caalamiga ah ee Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta.
Madaxdan mucaaradka ayaa kulankan ay la yeesheen saaxibada Somaliland ee caalamka ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ugu muhiisan tahay dorashooyinka madaxtooyada iyo golaha guurtida ee qorshuhu yahay inay qabsoomaan sanadka 2022.
Xogo KarinNews ka heshay kullankaasi ayaa lagu sheegay in madaxda mucaaradku ay danjirayaashaasi ka socday caalamka la wadaageen walaaca ay ka qabaan in doorashooyinku wakhtigooda ku qabsoonto. Waxaana ilowareedyo kulankaasi u dhuun daloola ay noo xaqiijiyeen in dhinacyadan ay sheegeen in madaxwayne Biixi uu qorshaynayo muddo kordhin loo sameeyo uuna keeno cudur daar kaste oo saamaxaya in wakhtiga loo dheereeyo.
Hogaamiyayaashan mucaaradku waxay madaxda caalamka la wadaageen inay dhankooda diyaar u yihiin ka qaybgalka doorashooyinka,marnabana aanay aqbalayn dib u dhac ku yimaada.
Kullankan waxa sidoo kale deeq bixiyayaashu ku caddeeyeen inay dhankooda kaalin wayn ka qaadanayaan dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba habka ugu fudud ee doorashooyinkaasi ugu dhacaan wakhtigoodii, dhawaana ay tagi doonaan Hargeysa si ay ula kulmaan madaxwayne Biixi.
Doorashada golaha guurtida aya qorshuhu yahay in ay dalka ka dhacdo bisha May ee sanadka 2022,wallow aan la diyaarin sharcigii lagu soo dooran lahaa golahaasi, halka sidoo kalena doorashada madaxtooyaduna ay qorshaysan tahay inay dhacdo bisha November ee sanadka 2022.